Toetry ny vy sy vy ny porofo China Manufacturer
Description:Toetry ny vy sy vy ny porofo,Toeram-pitrandrahana vy,AS / NZS CH-003 Glass Beads
Home > Products > Fehezam-boninkazo vita amin&#39;ny hoditra > Toetry ny vy sy vy ny porofo
Ny Chiye Glass Bead (Hebei) Co., Ltd, izay natsangana tamin'ny taona 1998, no lehibe indrindra sady mpamatsy angovo fitaratra ho an'ny taratra reflectivity ao Shina ankehitriny. Mipetraka any amin'ny tanànan'i Langfang izay 50 kilometatra lavitra any atsimo atsinanan'i Beijing, ary manodidina ny 100 kilaometatra lavitra ny seranan-tsambon'i Xingang ao Shina. Ny orinasa dia manana tsipika fanangom-bokatra 28 ho an'ny famokarana divay vita amin'ny vera isan-taona miaraka amin'ny vokatra isan-taona 100.000MT. ISO9001 rafitra fitantanana Quality sy ny rafitra fitantanana ny tontolo iainana IS014001.
Toetry ny vy sy vy ny porofo Toeram-pitrandrahana vy AS / NZS CH-003 Glass Beads Hazo fanasan-damba tsy misy porofo Kofehy rongony avo be ho an'ny felam-patana mafana Aforeto eo amin'ny vera glasy Pikantsary fanenon-jiro Minisitry ny fitohanana any Arabia Saodita